सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रहरी रिपोर्ट प्राप्त गर्न सहज
नेपाल लाइभ | २०७५ कार्तिक २२ बिहीबार | Thursday, November 08, 2018 ०३:१४:५९ मा प्रकाशित
काठमाडौं– अस्ट्रेलियामा बस्दै आएकी अञ्जु पोखरेलले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) लिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा इमेलबाट आवेदन पठाइन्। फोटो र आवश्यक कागजात पनि इमेलमै ‘अट्याच’ गरिन्। इमेल पाउनासाथ प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवेदन तथा कागजात उपर परीक्षण लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी तयार गरेको रिपोर्ट अञ्जुको इमेल ठेगानामै पठाइदियो।
देशबाहिर भएर पनि आवदेन पठाएको भोलिपल्टै अञ्जुले रिपोर्ट पाउन सकिन्। प्रहरी रिपोर्टका लागि उनले प्रहरी कार्यालय धाउनु परेन। लौ न छिटो गरिदिनुस् न भनेर भनसुन पनि गरिराख्नु परेन। काम सजिलै र छिट्टै भयो।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई प्रहरी रिपोर्ट आवश्यक परेमा यसअघि सम्बन्धितका आफन्त प्रहरी प्रधान कार्यालयमै पुगेर आवेदन दिनुपर्थ्यो। तोकिएको दिन पुनः रिपोर्ट लिन पुग्नुपर्थ्यो। स्वदेशमै रहेका सेवाग्राहीलाई फर्म दर्ता गर्न पनि लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो। तयार भएको रिपोर्ट लिन केही समय कुर्नुको विकल्प थिएन।
यो समस्या समाधान गरी काम सहज बनाउन प्रहरीले आवेदन संकलनका लागि ९ वटा केन्द्र थप गर्नुपर्यो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले केन्द्र थप गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझै व्यापकता दिई तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी रिपोर्ट तयार गर्दाको समस्या समाधान भई नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान हुन सकेको हो। यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै तत्काल हेर्न सकिने प्रविधिको प्रयोगले सहयोग पुर्याएको छ।
तीन महिनामा साढे ३ हजारलाई अनलाइनबाटै प्रहरी रिपोर्ट
अञ्जुजस्तै विदेशमा रहेर सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रहरी सेवा लिनेको संख्या अहिले ह्वात्तै बढेको छ। गत ३ महिनाको अवधिमा विदेशमा रहेका ३ हजार ६ सय नेपालीले आवेदन दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये ३ हजार ५ सय ५० जनालाई रिपोर्ट प्रदान गरिएको तथ्याङ्क छ। कूल दर्तामध्ये ७ सय ४९ जनाले इमेलमार्फत आवेदन दिएकोमा सबै जनालाई इमेलबाटै रिपोर्ट पठाइएको छ।
उक्त अवधिमा प्रहरी रिपोर्टका लागि ६३ हजार ३० सेवाग्राहीले नेपाल प्रहरीको चालचलन शाखामा प्रत्यक्ष आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ६२ हजार ६ सय ८४ लाई प्रहरी रिपोर्ट प्रदान गरिएको छ। ६५ जनालाई मुद्दा जनाएर दिइएको छ भने अन्य प्रकृयामै छन्। वितरण गरिएकामध्ये १ सय ९७ रिपोर्ट विदेशी नागरिकका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट २ हजार १ सय ४८ जनाले रिपोर्ट लिएका छन्।
यसअघि गत आर्थिक वर्षमा कूल २ लाख ७९ हजार ३ सय ३ जनाले प्रहरी रिपोर्टका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमा ४३ हजार ७ सय ६० महिला र २ लाख ३५ हजार ५ सय ४३ पुरूष थिए। फारम दर्ता भएकामध्ये २ लाख ७७ हजार ४ सय ९५ जनालाई रिपोर्ट प्रदान गरिएको थियो। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ भन्दा ६६ हजार ९ ले बढी हो। उक्त आर्थिक वर्षमा कूल २ लाख ११ हजार ४ सय ३३ प्रहरी रिपोर्ट प्रदान गरिएको थियो।
कहाँ–कहाँबाट पाइन्छ रिपोर्ट?
सेवाग्राहीको सजिलोका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रानीपोखरी, महाराजगन्ज, गौशाला, कालीमाटी, ललितपुरको जावलाखेल, भक्तपुरमा आवेदन दर्ता र रिपोर्ट वितरण केन्द्र तोकिएको छ। उपत्यकाबाहिर ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा यो सुविधा उपलब्ध छ।
भीड हुने केन्द्रमा बिहान ८ बजे नै फारम लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवाग्राहीले उपत्यकामा आवेदन दिएको ३ दिनमा र प्रदेशमा ७ दिनमा प्रहरी रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छन्। कुनै सेवाग्राहीले तत्काल अत्यावश्यक परेको निवेदन दिएमा आवश्यकता हेरिकन तोकिएको मितिभन्दा अगावै पनि उपलब्ध गराउने गरिन्छ। यो सुविधा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्र उपलब्ध छ। यस्तो छिटोछरितो सुविधा प्रहरीको सकृयता र सूचना प्रविधिको प्रयोगले मात्र सम्भव भएको हो।
प्रकृया थप सहज बनाउने तयारी
सूचना प्रविधि आधुनिक जगतको टड्कारो आवश्यकता हो। यसको प्रयोगलाई अझै सशक्त बनाउन नेपाल प्रहरी प्रयासरत छ। आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने नीति प्रहरीले अख्तियार गरेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘हालको प्रहरी रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई अझै छिटो छरितो र सहज हुने गरी उपलब्ध गराउन भविष्यमा अनलाइनबाटै प्राविधिक संयन्त्र तयार गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको छ। यसका लागि केही समय लाग्छ।’
कसरी तयार गरिन्छ रिपोर्ट?
नेपाल प्रहरीले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण, त्यसका लागि तालिम दिने लगायतका सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम प्रहरी प्रधान कार्यालय, सूचना प्रविधि निर्देशनालयले गर्दै आएको छ। निर्मित सफ्टवेयरमध्ये क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सिआरएस), अटोमेटेड फिङ्गर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एएफआइएस)’ र क्यारेक्टर भेरिफिकेसन इन्फरमेसन सिस्टम (सिभिआइएस) सफ्टवेयरहरू प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी कामका लागि प्रयोगमा छन्।
सिआरएसमा आपराधिक घटना र संलग्न व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख राखिन्छ। जसबाट कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न भए नभएको जाँच गरिन्छ। एएफआइएस सफ्टवयरले विदेशी नागरिक नेपालमा रहँदाको आपराधिक अभिलेख औंठा छापबाट थप जाँच गर्न मद्दत गर्दछ।
दुवै प्रकृयाबाट आवश्यक जाँचपछि ‘फर्म्याट’अनुसारको रिपोर्ट प्रिन्ट गर्ने काममा सिभिआइएस सफ्टवेयरले सघाउँछ। निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुनिलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रहरी रिपोर्ट वितरणलाई व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउन यी सफ्टवयरहरूले सघाउ पुर्‍याएका छन्। आगामी दिनमा प्रहरी संगठनको आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयर विकास गरिने छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी र संगठनको हित अनुकूल बनाउन निर्देशनालय कटिबद्ध छ।’
प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी काम प्रहरी प्रधान कार्यालय, सिआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम) शाखाको सहयोगमा चालचलन शाखाले गर्दछ। चालचलन शाखाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक भिमकिरण बोगटीले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगले काम गर्न अति छिटो र सजिलो भएको प्रतिक्रिया दिए।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी रिपोर्टसम्बन्धी काम पूर्णतः निःशुल्क बनाएको छ। आवेदन फर्म सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमै निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ। नेपाल प्रहरीको वेबसाइटबाट सेवाग्राही आफैंले डाउनलोड गरेर पनि भर्न सक्छन्। स्टिकरवापत लाग्ने १० रुपैयाँसमेत हाललाई निःशुल्क गरिएको छ।